2 Château Monciaux Gîte Monbazillac Iqula lokuqubha iTennis
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uThomas iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Embindini wePérigord, imizuzu engama-30 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseBergerac, kufutshane neendawo zabakhenkethi, kwindawo enemithi yeehektare ezili-10 kuhlala inqaba entle yaseMonciaux (inkulungwane ye-18) kunye neendawo zayo zokuhlala ezi-3.
Indlu yethu encinci ibonelela ngomtsalane wendlu yasePérigord enabo bonke ubutofotofo obuyimfuneko kwiholide efanelekileyo (indawo yokuqubha eshushu ngexesha lonyaka, inkundla yentenetya, njl.njl.)
Kwimeko ye-bucolic efanelekileyo yokuphumla, i-cottage yethu ithatha abantu aba-4, kunye nethuba lokongeza abantu aba-2 kwi-sofa bed.
Ukwenza uninzi lokuhlala kwakho, i-cottage inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nendawo yomlilo esebenzayo.
Amagumbi okulala ama-2 aya kuhlala abantu aba-4 abanebhedi ephindwe kabini kunye neebhedi ezi-2 ezingatshatanga ezinokutyhala kunye.
Singakunika nebhedi yomntwana.
Ngaphandle, i-gite yabelana ngedama lokuqubha kunye nenkundla ye-tennis yelizwe kunye "nejusi" yayo kunye nezinye ii-gites ezi-2 kwinqaba.
Ithafa layo labucala livezwe ngokufanelekileyo kwaye lixhotyiswe nge-BBQ kunye neefanitshala ezahlukeneyo zegadi.
Ubukhulu beendonga zeloji buya kukuqinisekisa ukuhlaziyeka okumnandi ngexesha leenyanga zasehlotyeni kunye nobushushu obuthuthuzelayo ngexesha leenyanga zasebusika.
Iintlawulo ezongezelelweyo zokufudumeza zingasebenza.
Nceda uqaphele ukuba idama lokuqubha livuliwe ukususela ekuqaleni kukaMeyi ukuya ekupheleni kukaSeptemba. Ifudunyezwa kusetyenziswa i-shutter yelanga kwaye inokufudunyezwa kunye nempompo yokushisa ngesicelo kunye neendleko ezongezelelweyo.
Ekugqibeleni, malunga nelinen yelinen kunye neetawuli, izongezelelo ze-euro ezingama-20 ngomntu ngamnye zilindeleke kuyo nayiphi na indawo yokuhlala engaphantsi kweveki.
I-Domaine du Château de Monciaux ifumaneka kufuphi ne-Bourrou, kwindlela eya e-Manzac-sur-Vern kwi-bucolic kunye ne-green setting.
Ibekwe kwindawo efanelekileyo entliziyweni yePérigord, isebe elityebileyo kwimbali yelifa (iidolophu kunye neenqaba), imbali yamandulo (imiqolomba kunye neendawo zokuhlala) kodwa eyaziwa ngokuba yi-gastronomy (i-truffles, foie gras kunye newayini, phakathi kwezinye izinto, ziyakwanelisa incasa yakho. Amaqhina - ngeveki organic sur market Bourrou, vula unyaka wonke - iivenkile kunye nemarike e Villamblard 7 kms).